BBC Learning English - Course: How do I Burmese / Unit 1 / Session 1 / Activity 1
Unit 1: How do I
Open unit selectorClose unit selectorUnit 1 How do I
1 How do I
Listen to find out how to startaconversation when meeting new people in English.
လူသစ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လ်ိုစစကားပြောရမလဲဆိုတာ နားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါ။
လူသစ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ အခါ မေးလေ့မေးထရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အဖြေတွေကို တွဲပေးပါ။
a) What’s your name? 1. I’m from Liverpool.
b) Where are you from? 2. I’mateacher.
c) What do you do? 3. Hello, I’m Lisa.
Listen to check your answers. Then compare with the transcript below. အဖြေတွေသိရအောင် နားထောင်ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ အောက်ပါ စာသားတွေနဲ့ တိုက်ကြည့်ပါ။
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာချင်သူတွေ အတွက် အတော်လေး လက်တွေ့ အသုံး ဝင်မယ့် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အစီအစဉ်လေးကို စလိုက်ကြရအောင်ပါ။ ကိုယ်တခုခုလုပ်ချင်တယ် ပြောချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ပြောကြမလဲ၊ ဘယ်လို စကားလုံးတွေ သုံးကြမလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြမယ့် အစီစဉ်ကို How do I လို့ နာမည် ပေးလိုက်ကြပါစို့နော်။ ကျွန်မက ရီရီအောင်ပါ။
ဒီကနေ့ သင်ခန်းစာမှာ ကိုယ်နဲ့ မသိသူ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တွေ့ကြရင် ဘယ်လို စကား စပြီး ပြောကြမလဲ၊ မိတ်ဆက်ကြမလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြပါမယ်။ အခုတော့ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံကြတဲ့ လူနှစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပြောကြတာကို နားထောင်ကြည့်ကြ ရအောင်ပါ။သူတို့ပြောတာ အားလုံး နားမလည်လိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ နောက်ပိုင်းမှာ အားလုံး သိသွားအောင် ပြောပြပေးမှာပါ။
Hi, my name’s Robert. What’s your name?
Hello, I’m Lisa. Nice to meet you.
Nice to meet you, too, Lisa. Where are you from?
I’m from Liverpool.
ရောဘတ်နဲ့ လီဆာတို့ အပြန်အလှန် မိတ်ဆက်တာ ကြားလိုက်ကြမှာပါ။
Hi, my name’s Robert. ကျွန်တော့်နာမည်က ရောဘတ်ပါ။ ခင်ဗျား နာမည်က ဘယ်သူလဲ What’s your name? လို့ ပြန်မေးပါတယ်။
ဒီတော့ လီဆာက …. Hello, I’m Lisa. ‘Nice to meet you’ ကျွန်မ လီဆာပါလို့ ပြန်ဖြေပြီး တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။ ရောဘတ် ကလည်း Nice to meet you, too သူလည်း တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
ပြီးတော့ Where are you from? ခင်ဗျား ဘယ်က လာတာလဲဆိုပြီး ဆက်မေးတာကို လီဆာက I’m from Liverpool ကျွန်မ လစ်ဗာပူးကပါတဲ့။ ရောဘတ်ကပဲ ဆက်ပြီးတော့ And what do you do? ဘာအလုပ်အကိုင်လုပ်သလဲလို့ မေးတော့ …. လီဆာက I’mateacher. ကျွန်မက ဆရာမ တစ်ယောက်ပါလို့ ဖြေပါတယ်။
ဒီတော့ ရောဘတ်နဲ့ လီဆာတို့ နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် တွေ့တော့ ဘယ်လို စကား စပြီး မိတ်ဆက်ကြလဲ ဘာတွေ ပြောကြသလဲ ပြန်ကြည့်ရင် နာမည် ဘယ်သူလဲ မေးတယ်၊ ဘယ်က လာသလဲ ဘာအလုပ် လုပ်သလဲ မေးကြတယ် ဆိုတာ သိလိုက်ရပြီနော်။
ရောဘတ်နဲ့ လီဆာတို့ နှစ်ယောက် ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်ပြောပြီး မိတ်ဆက်တော့ မတူတဲ့ အသုံး အနှုန်း နှစ်မျိုး သုံးသွားတာကိုလည်း သတိ ပြုမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုတခါ ထပ်နားထောင်ကြည့်ပါမယ်။
Hi, my name’s Robert.
Hello, I’m Lisa.
ရောဘတ်က my name’s Robert....... လို့ သုံးခဲ့ပါတယ်။ , my name’s ....ရောဘတ်၊ my name is ...ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အတိုကောက် ပြောခဲ့ပါတာပါ။
လီဆာကျတော့ I’m Lisa. ကျွန်မ လီဆာပါလို့ ပြောသွား ပါတယ်။ I am ကို aporstrophy နဲ့ I’m ဆိုပြီး အတိုကောက် သုံးခဲ့ပါတယ်။
No, they used two different ways! ‘My name’s…’ and ‘I’m…’.
And the pronunciation is important here, so let’s quickly practise - repeat after me:
ဒါဆို သူတို့ သုံးသွားတဲ့ အသုံး အနှုန်း နှစ်မျိုးကို သိလိုက်ပြီ၊ မှတ်မိသွားကြပြီပေါ့နော်။
ဒီနေရာမှာ အသံထွက် မှန်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့
ခပ်မြန်မြန် လေ့ကျင့်ခန်းလေး လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ နောက်ကနေ လိုက်ဆိုကြည့်ပါဦး
ဟုတ်ပါပြီနော် သိပ်တော်တာပဲ။ ဒီတော့ ရောဘတ်က လီဆာကို ဘာတွေ ဆက်ပြောသလဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြပါမယ်။ သူက လီဆာကို မေးခွန်း သုံးခွန်း မေးပါတယ်။ ဘာမေးခွန်းတွေလဲ ဆိုတာ အတူတူ ပြန်နားထောင်ကြည့်ကြပါမယ်နော်
OK! ပထမ မေခွန်းက လီဆာကို နာမည်ဘယ်သူလဲလို့ မေးတယ်၊ ဒုတိယ မေးခွန်းက ဘယ်က လာတာလဲလို့ မေးတယ်၊ တတိယ ကတော့ အလုပ်အကိုင်ဘာလုပ်လဲလို့ မေးသွားတာပါ။
ဒါတွေက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပထမဆုံး တွေ့ကြ ဆုံကြတဲ့ အခါ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ ဒီတော့ ဒီမေးခွန်းတွေက သိပ် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါတွေ မေးတဲ့ အခါမှာ အသံနေ အသံထားကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ဝင်တစား ရှိတဲ့ လေသံမျိုး ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Yes, these are the most common questions to ask someone when you first meet them, so they’re very useful. But the pronunciation is important. You need to sound interested!
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသံ အနိမ့်အမြင့်က အရေးကြီးသလို၊ စကားလုံးတွေကို ဘယ်နေရာတွေမှာ အသံ အလေး အဖော့ ပြောရမယ်၊ ဘယ်လို ချိတ်ဆက် ပြောရမယ် ဆိုတာတွေ ကလည်း သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီတော့ အတူတူ လေ့ကျင့်ကြည့်ကြပါဦးမယ်နော်။
Yes, so let’s quickly practise together! Repeat after me:
And how did Lisa answer these questions? You already know that there are two ways to answer ‘What’s your name?’ Let’s listen again to how Lisa answers ‘Where are you from?’ and ‘What do you do?’
So, Lisa used ‘I’m’ to answer both questions.
လီဆာက မေးခွန်း နှစ်ခုစလုံးမှာ I’m လို့ သုံးပြီး ဖြေသွားပါတယ်။
Yes, but if you say ‘I’m from…’ you’re talking aboutaplace.
I’m from…’ လို့ ပြောရင် ဒါက နေရာကို ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။
And if you say ‘I’m a…’ you’re talking about your job. Remember to use the ‘a’, as it’s important here.
I’ma…’ လို့ ဆိုရင်တော့ အလုပ် အကိုင်ကို ပြောတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ ‘a’ ဆိုတဲ့ စကားလုံးသုံးဖို့ အရေးကြီးတော့ မမေ့ မလျော့ သုံးဖို့ လည်း သတိရပါနော်။ အခုတခါ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြန်ပြီ။ စောစောပိုင်းက မေးခွန်းသုံးခုကို ဖြေထားတဲ့ အဖြေတွေ ထဲက တစ်ခုကို အရင် နားထောင်ကြပါမယ်။
I’m from Cambridge.
ကျွန်တော်က Cambridge ကပါတဲ့
Cambridge ဆိုတာက နေရာ တစ်ခုကိုပြောတာဆိုတော့ မေးတဲ့ သူက ဘယ်လို မေးတာ ဖြစ်မလဲ စဉ်စားပြီး ပြောကြည့်ပါနော်၊ ဖြေဖို့ အချိန်ခဏ ပေးပါမယ်။ ပြီးရင် Sam က အဲဒီ မေးခွန်းက ဘာလဲ ဆိုတာ ပြောပြပါမယ်
ဟုတ်ပါတယ်။ ဘယ်ကလဲ ဘယ်မှာ နေတာလဲလို့ မေးတာပါ။အခုတခါ နောက် အဖြေတစ်ခုကို နားထောင် ကြည့်ပါဦးနော်။
I’mataxi driver.
ကျွန်မ က အငှားကား မောင်းသမား တစ်ယောက်ပါ ဆိုတော့ ဒီအဖြေအတွက် မေးခွန်းက ဘာဖြစ်မလဲ စက်းစားပြီး ပြောကြည့်ပါဦး
OK, so ‘a taxi driver’ isajob so what’s the correct question?
ဒါဆိုရင် အရင်က မသိခဲ့သူနှစ်ယောက် ဘယ်လို စပြီး မိတ်ဆက်ကြတယ်၊ ဘယ်လို မေးခွန်းတွေ မေးကြ ဖြေကြတယ် ဆိုတာ သိသွားကြပြီပေါ့နော်။
Nice to meet you တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်
Yes, nice to meet you!
၁။ My name’s ဆိုတာနဲ့ I’m ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တူပါလား။
၂။ Nice to meet you ကို ဘယ်အချိန်မှာ သုံးပြီး၊ Nice to meet you, too. ကို ဘယ်အခါသုံးရပါသလဲ။
Nice to meet you, too ကို Nice to meet you လို့ တစ်ယောက်ယောက်က ပြောတဲ့အခါ ပြန်တုံ့ပြန်ပြီး ပြောရပါတယ်။
၃။Where are you from? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေတဲ့အခါ from ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုချန်ထားနိုင်ပါသလား။
ချန်လို့မရပါဘူး။ from ကို အမြဲပဲ သုံးရပါတယ်။ မြို့တွေ ရွာတွေရဲ့ နာမည်တွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ နာမည်တွေ ရှေ့မှာ သုံးရပါတယ်။
I’m from the U.K..
I’m from the coast (ကမ်းရိုးတန်း).
၄။ အလုပ်အကိုင်ရဲ့ရှေ့မှာaကို ထည့်ဖို့လိုလား။
ထည့်ရပါတယ်။ ရေတွက်လို့ရတဲ့ နာမ်ရဲ့ အရှေ့မှာaကို အမြဲ ထည့်ရပါတယ်။
ကြိယာကို ‘am’ သို့မဟုတ် ‘is’ ကို အမြဲသုံးရပါမယ်။
Which is an INCORRECT answer to the question ‘What’s your name?’
a I’m Sam. 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLIOGAkuGAq+GAn+GArCDhgIDhgK3hgK/hgJrhgLnhgLfhgJjhgJrhgLnhgJ7hgLDhgJzhgLLhgIbhgK3hgK/hgJDhgKwg4YCZ4YCt4YCQ4YC54YCG4YCA4YC54YCQ4YCy4YC3IOGAoeGAseGAu+GAluGAmeGAveGAlOGAuSDhgo/hgL3hgIXhgLnhgIHhgK/hgJHhgLLhgIAg4YCQ4YCF4YC54YCB4YCv4YCV4YCr4YGL
b My name’s Sam. 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLIOGAkuGAq+GAn+GArCDhgIDhgK3hgK/hgJrhgLnhgLfhgJjhgJrhgLnhgJ7hgLDhgJzhgLLhgIbhgK3hgK/hgJDhgKwg4YCZ4YCt4YCQ4YC54YCG4YCA4YC54YCQ4YCy4YC3IOGAoeGAseGAu+GAluGAmeGAveGAlOGAuSDhgo/hgL3hgIXhgLnhgIHhgK/hgJHhgLLhgIAg4YCQ4YCF4YC54YCB4YCv4YCV4YCr4YGL
c I Sam. 4YCZ4YC94YCU4YC54YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLIOKAmEnigJkg4YCA4YCt4YCvIOGAnuGAr+GAtuGAuOGBv+GAleGAruGAhuGAreGAryDhgKHhgLLhgJLhgK7hgLHhgJThgKzhgIDhgLnhgJnhgL3hgKwg4oCYYW3igJkg4YCh4YG/4YCZ4YCy4YCQ4YCZ4YC54YC4IOGAnOGAreGAr+GAgOGAueGAm+GAleGAq+GAkOGAmuGAueGBiw==
မေးခွန်းရဲ့ နောက်ဆုံး စကားလုံးကို ကြည့်ပါ။
Which question asks about someone’s job (အလုပ်)?
a What’s your name? 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLIOGAkOGAheGAueGAseGAmuGArOGAgOGAueGAseGAmuGArOGAgOGAueGAgOGAreGAryDhgJjhgKzhgKHhgJzhgK/hgJXhgLnhgJzhgK/hgJXhgLnhgJ7hgJzhgLLhgJzhgK3hgK/hgpQg4YCx4YCZ4YC44YCQ4YCy4YC34YCh4YCB4YCrIOKAmGRv4oCZIOGAhuGAreGAr+GAkOGAsuGAtyDhgIXhgIDhgKzhgLjhgJzhgK/hgLbhgLjhgIDhgK3hgK8g4YCe4YCv4YC24YC44YCx4YCc4YC34YCb4YC94YCt4YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLIOGAkuGAruGAseGAmeGAuOGAgeGAvOGAlOGAueGAuOGAmeGAveGArOKAmERv4oCZIOGAgOGAreGAryDhgKHhgIDhgLDhgoDhgIDhgK3hgJrhgKwg4YCh4YCx4YCU4YCU4YCy4YKU4YCx4YCb4YCsIOGCgOGAgOGAreGAmuGArCDhgKHhgLHhgJThgJThgLLhgpThgJXhgKsg4YCe4YCv4YC24YC44YCQ4YCs4YCx4YG+4YCA4YCs4YCE4YC54YC3IOGCj+GAveGAheGAueGAgeGAq+GAleGAq+GAkOGArCDhgLHhgJDhgLzhgpXhgJvhgJnhgL3hgKzhgJXhgKvhgYs=
b Where are you from? 4YCZ4YC94YCs4YC44YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLIOGAkOGAheGAueGAseGAmuGArOGAgOGAueGAseGAmuGArOGAgOGAueGAgOGAreGAryDhgJjhgKzhgKHhgJzhgK/hgJXhgLnhgJzhgK/hgJXhgLnhgJ7hgJzhgLLhgJzhgK3hgK/hgpQg4YCx4YCZ4YC44YCQ4YCy4YC34YCh4YCB4YCrIOKAmGRv4oCZIOGAhuGAreGAr+GAkOGAsuGAtyDhgIXhgIDhgKzhgLjhgJzhgK/hgLbhgLjhgIDhgK3hgK8g4YCe4YCv4YC24YC44YCx4YCc4YC34YCb4YC94YCt4YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLIOGAkuGAruGAseGAmeGAuOGAgeGAvOGAlOGAueGAuOGAmeGAveGArOKAmERv4oCZIOGAgOGAreGAryDhgKHhgIDhgLDhgoDhgIDhgK3hgJrhgKwg4YCh4YCx4YCU4YCU4YCy4YKU4YCx4YCb4YCsIOGCgOGAgOGAreGAmuGArCDhgKHhgLHhgJThgJThgLLhgpThgJXhgKsg4YCe4YCv4YC24YC44YCQ4YCs4YCx4YG+4YCA4YCs4YCE4YC54YC3IOGCj+GAveGAheGAueGAgeGAq+GAleGAq+GAkOGArCDhgLHhgJDhgLzhgpXhgJvhgJnhgL3hgKzhgJXhgKvhgYs=
c What do you do? 4YCZ4YC94YCU4YC54YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLIOGAkOGAheGAueGAseGAmuGArOGAgOGAueGAseGAmuGArOGAgOGAueGAm+GAsuGClSDhgKHhgJzhgK/hgJXhgLnhgKHhgIDhgK3hgK/hgIThgLnhgIDhgK3hgK8g4YCx4YCZ4YC44YCZ4YCa4YC54YCG4YCt4YCv4YCb4YCE4YC5IOGCgOGAgOGAreGAmuGArCDhgKHhgLHhgJThgJThgLLhgpTigJhEb+KAmSDhgIDhgK3hgK8g4YCe4YCv4YC24YC44YCQ4YCsIOGAmeGAveGAlOGAueGAleGAq+GAkOGAmuGAueGBiw==
Which question asks about place (နေရာ) ?
a What’s your name? 4YCZ4YCf4YCv4YCQ4YC54YCV4YCr4YCY4YCw4YC44YGLIOGAseGAlOGAm+GArOGAgOGAreGAr+GAseGAmeGAuOGAkOGAsuGAtyDhgKHhgIHhgKvhgJnhgL3hgKwg4YCx4YCZ4YC44YCB4YC84YCU4YC54YC44YCb4YCy4YKV4YCh4YCFIOKAmHdoZXJl4oCZIOGAgOGAreGAryDhgKHhgJ7hgK/hgLbhgLjhgLvhgJXhgLPhgLHhgJzhgLcg4YCb4YC94YCt4YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGL
b Where are you from? 4YCZ4YC94YCU4YC54YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGLIOGAseGAlOGAm+GArOGAoeGAseGBvuGAgOGArOGAhOGAueGAuCDhgLHhgLvhgJXhgKzhgJDhgLLhgLfhgKHhgIHhgKsgV2hlcmXigJkg4YCU4YCy4YKUIOKAmGZyb23igJkg4YCQ4YCt4YCv4YKU4YCA4YCt4YCvIOGAnuGAr+GAtuGAuOGAleGAq+GAkOGAmuGAueGBiw==
c What do you do? 4YCZ4YCf4YCv4YCQ4YC54YCV4YCr4YCY4YCw4YC44YGLIOGAseGAlOGAm+GArOGAgOGAreGAr+GAseGAmeGAuOGAkOGAsuGAtyDhgKHhgIHhgKvhgJnhgL3hgKwg4YCx4YCZ4YC44YCB4YC84YCU4YC54YC44YCb4YCy4YKV4YCh4YCFIOKAmHdoZXJl4oCZIOGAgOGAreGAryDhgKHhgJ7hgK/hgLbhgLjhgLvhgJXhgLPhgLHhgJzhgLcg4YCb4YC94YCt4YCV4YCr4YCQ4YCa4YC54YGL
Join us for our next episode of How to…, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
How do I …. နောက်ထပ် သင်ခန်းစာတွေကို ထပ်ပြီး တင်ဆက် ပေးဦးပါမယ်။ အသုံးဝင်မယ့် စကားပြောနည်းတွေ လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်သလို၊ သူများပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကား နားလည်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုလည်း တိုးလာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်/ကျွန်မ နာမည်က ….
ကျွန်တော်လည်း/ကျွန်မလည်း တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။